IMEX America: Haddii aan dooneyno wax cusub oo caadi ah, waa inaan annaga sameysannaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » IMEX America: Haddii aan dooneyno wax cusub oo caadi ah, waa inaan annaga sameysannaa
Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Hadlayayaasha ka socda aerospace, farshaxanka, naqshadeynta, iyo teknolojiyadda dhacdooyinka waxay sahamiyaan hal-abuurnimo xad-dhaaf ah Maalinta BIYAHA 'IMEX Buzz' ee Luulyo.
Wadashaqeynta iyo hal-abuurnimaduba waa ereyada ilaalada u ah Maalinta Buzz-ka IMEX ee bisha Luulyo.
Tani waxay noqon doontaa galab waxbarasho bilaash ah oo ku saabsan barnaamijka cusub ee shirkadda, IMEX BuzzHub.
Calanka hoostiisa Hal-abuurnimo ba'an - maxay tahay maxayse muhiim u tahay? khabiiro ka socda Airbus, Smyle, GCB iyo wakaaladaha hal abuurka ayaa sharxi doona sida ay u riixeen xuduudaha si ay u keenaan isbedel una abuuraan qiime cusub warshadooda.
Sidoo kale - warshadaha marka hore - Kooxda IMEX waxay la shaqeynayaan Swapcard si ay u bixiyaan kal-fadhiyo is-dhaafsi ah. Kaqeybgalayaasha labada Swapcard ee Evolve Homecoming dhacdo: Soo-celinta Weyn ee Weyn iyo IMEX's Buzz Day waxay awoodi doonaan inay marin u helaan waxyaabaha la wadaago oo ay ku jiraan nuxurka Arianna Huffington
Labada qabiilo dhacdaba waxaa lagu casuumay inay isugu yimaadaan munaasabada ugu soo dhow Gather Buzz Fest oo lagu marti galiyay barxada 'Gather.Town'. Niyad-jabka avatar-hogaamiyaha u ah ciyaaraha fiidiyowga ee 80 wuxuu ahaa mid aad u weyn intii lagu jiray isku daygii IMEX bishii hore.
Cusbooneysiin ba'an - laga bilaabo Airbus
Hogaamiyaha sheybaarka hal-abuurka ee Airbus wuxuu soo bandhigayaa Buzz Day 7 July. Christophe Debard waa hogaamiyaha ProtoSpace Toulouse, oo ah sheybaar loogu tala galay hal-abuurka Airbus. Waxa kale oo uu aasaasay Shaybaarka Aadamiga ee Airbus - waa hindise u oggolaanaya shaqaalaha Airbus inay ka qaybgalaan mashaariic si toos ah u saameynaya meelaha ay ka mid yihiin naafonimada, caafimaadka, waxbarashada iyo deegaanka. Barnaamijka waxaa loo sameeyay khibrada shaqsiyadeed ee Christophe ee naafada.
Christophe Debard, Madaxa ProtoSpace Toulouse - Airbus
Ahaanshaha kheyraad iyo wadashaqeyn si loo wado hal-abuurnimo waa mowduuc soconaya inta lagu jiro kal-fadhiyada maalinta oo dhan. Robert Dunsmore, oo hogaaminaya mid ka mid ah fadhiyada, ayaa sharxaya: “Geesi noqo. Haddii aan dooneyno wax cusub oo caadi ah, waa inaan annaga lafteena abuurnaa! ” La-taliye hal abuur leh Robert wuxuu iskaashi la leeyahay Frankie Boyle, oo ah muqaal farshaxan oo reer UK ah oo in ka badan toban sano khibrad u leh dhinacyada farshaxanka, madadaalada iyo dhacdooyinka Frankie waxay ku takhasustay u isticmaalista iftiinka sheeko qorista iyo abuurista khibrad dareen ah: 'Iftiinku waa luqad', ayay tiri. Frankie waxay la wadaagi doontaa cilmi baaristeeda muhiimada iftiinka u leeyahay ladnaanta, dowrkeeda asalka ah ee howlahayaga garashada, caafimaadka maskaxda iyo miyir qabka nolol maalmeedka.
Frankie Boyle, Aasaasaha - Agaasimaha Hal abuurka ah ee Febo Designs Ltd.
GCB wuxuu bixin doonaa aragtidooda abuureyaasha 'Qolka Jawaabta' cusub. Mashruucan hal-abuurnimada furan wuxuu dhiirrigelinayaa qorsheeyeyaasha kulanka caalamiga ah, qabanqaabiyaasha, alaab-qeybiyeyaasha, iyo ka-qaybgalayaasha munaasabadda inay soo ururiyaan oo ay si wadajir ah u horumariyaan moodello ganacsi, badeecooyin ama adeegyo cusub.
'Maxaad ka saari doontaa dhibaatadan?' ayuu weydiiyay Matt Margetson, Aasaasaha & Agaasimaha Cusub ee Smyle, fadhigiisa. Wuxuu eegi doonaa sida magacyadu ay talo uga raadsadeen warshadaha hal abuurka ah si ay ula xiriiraan oo ay ula xiriiraan dhagaystayaashooda siyaabo badan oo soo jiidasho leh. Isagoo si deg deg ah dib ugu qaabeeyey shirkadda si uu uhormariyo khibradaha dalwaddii, Matt wuxuu ku hogaaminayaa kooxdiisa raadinta fikirka ugufiican iyo teknolojiyadaha ugu dambeeya.
Warshadaha marka hore - IMEX iyo Evolve qabiilooyin ayaa kulmaya
Markii ugu horreysay ee warshadaha, kooxda IMEX waxay la shaqeyneysaa Swapcard si loo sii daayo waxyaabaha isla socda. Kaqeybgalayaasha Maalinta Buzz iyo Evolve's Homecoming waxay heli karaan kalfadhi gaar ah oo iskutallaab ah oo ku saabsan sida loo dhiso dhaqanka hal-abuurka.
Lataliyaha Istaraatiijiga Cris Beswick, oo cashar bixin doona, ayaa sharaxaya: "Baahida loo qabo ujeedo hogaaminta, hogaaminta hal abuurka iyo dhisida dhaqanka hal abuurnimada waligeed kama sarreyn ajandaha istiraatiijiyadeed." Waxaa loo aqoonsan yahay adduunka inuu yahay hogaamiye feker istiraatiijiyad hal-abuur, hoggaamin iyo dhaqan, Cris wuxuu ka caawiyay qaar ka mid ah madaxda ugu hamiga badan adduunka, hoggaamiyeyaasha, shirkadaha iyo dawladaha inay xalliyaan caqabadaha ugu adag ee hal-abuurnimo. Wuxuu ka faaiidaysan doonaa waayo-aragnimadan oo uu la wadaagi doonaa qaar ka mid ah talooyinka ka soo baxa buuggiisa ugu fiican ee "Dhisida Dhaqanka Hal-abuurnimada."
Goobta waxqabadka ayaa markaa sii socon doonta iyada oo fursad loo siinayo Buzz Day iyo Swapcard ee bulshooyinka loo yaqaan 'Evolve' si ay ugu wada noolaadaan Gather.Town inta lagu jiro Gather Buzz Fest. Mid ka mid ah kaqeybgale yaasha ayaa ku sifeeyay "waxaad moodaa inaad u booday shaashadda kumbuyuutarkaaga qol ay ka buuxaan dad isla sameeyay," Gather.Town waxay isku daraysaa avataar fudud oo leh 80s vibe game si loo abuuro adduun dhijitaal ah oo xiiso leh dhakhso iyo saaxiibtinimo leh.
Carina Bauer, oo ah agaasimaha guud ee kooxda IMEX, ayaa sharraxaad ka bixisay: “Hal-abuurnimadu waa sida kaliya ee lagu abuuri karo isbeddel macno leh oo horay loogu sii socdo. IMEX marwalba waxaan ku dadaalnaa inaan riixno xuduudaha hal abuurka ah oo aan tijaabino annagoo ka wakiil ah warshadaha. Ogolaanshaheena '' BuzzHubbers '' oo aan ku yara milicsano bulshada Evolve iyo fursada aan kuwada baashaalno - Gather Buzz Fest on Gather. Waan ku faraxsanahay inaan ku hogaaminno niyadan iskaashiga ah, ma ahan tartan. ”
Julien Bouvier, oo ah Agaasimaha Dhacdooyinka Dhacdooyinka iyo Istiraatiijiyadda Dhacdooyinka ee Swapcard, ayaa intaas ku daray: “IMEX iyo Swapcard labaduba waxay bil walba u gudbinayeen waxyaabaha ay ka kooban yihiin dhagaystayaashooda dijitaalka ah iyo fikradda ah in la wadaago nuxurku waxay u yimaadeen labada kooxoodba si dhiirrigelin ah! Bulshooyinka loo yaqaan 'Evolve iyo BuzzHub' labaduba waa tusaalooyinka ugu horreeya ee abaabulayaasha dhacdooyinka oo u guuraya qaab hawleed 365 maalmood ah Kaliya maaha inay kordhiso gaadhista caalamiga ah ee dhagaystayaal kasta, laakiin jaaliyaduhu waxay bixiyaan meel lagu wadaago aqoonta aaminka ah iyo daahfurnaanta udhaxeysa astaanta iyo macmiilka. ”
IMEX-da Maalinta Buzz waxay dhacdaa 7da Luulyo diiwaangelintuna waa free. Maalinta buuxda ee waxbarashadu waxay la wadaagtaa Ku Abuur Hoyga: Soo Laabashada Warshadaha Weyn.
IMEX BuzzHub wuxuu soconayaa illaa Sebtembar isagoo keenaya isku xirnaanta aadanaha, qiimaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo habeeyay 'Wadada Mandalay Bay' inta lagu gudajiro IMEX Ameerika, Noofambar 9-11, iyo Smart Monday, oo ay ku shaqeyso MPI nofeembar 8.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan IMEX